No matter what they call us » What if ...
Tuesday, April 27, 2010 | Add a comment
Taloha aho dia mampiasa ny voambolana hoe “Malagasy” rehefa manoratra amin’ny fiteny frantsay ka te hanondro ny teny hoe “Malgache” : la langue malagasy, le peuple malagasy, … Nisy namana Malagasy anefa nanoro ahy hoe tsy teny frantsay izany “Malagasy” izany fa malgache no tokony hosoratana hoy izy. Raha amin’ny tenim-pirenena hafa toy ny anglisy dia malagasy no fanoratra, saingy ny famaky azy kosa aza dia tsy tokony hatao famaky gasy fa tsindriana mafy ny y farany, toy ny hoe “malagassii”.
Hay tokoa moa isika Malagasy ireto ka dia zatra loatra an’ity vary amin’anana ity, ka ny tenindrenintsika efa tsy hay rahateo ny hamoaka fehezanteny tokana tsy misy tena vahiny, dia ny teny vahiny mba efa voafehintsika kokoa indray dia iniana atao vary amin’anana tsotr’izao.
Rehefa nohadihadiana dia hoe manivaiva ny mahamalagasy hono ilay voambolana ataon’ny Frantsay hoe “Malgache” fa Mal + gache izay zavatra roa samy tsy dia tsara loatra. Angaha? Aza masoso-sceptible loatra e! Io toetra mora tohina io nefa mitondra mankaiza? Iavoloha izao toa hoe tsy Iavoloha hono no tena anarany taloha fa satria misy lapan-dRatsiraka dia novaina mba ho mihaja kokoa. Mahabo toa nisy tovana kely izay ilay anarany fa saingy voambolana mingoso izy aty afovoan-tany dia nohafohezina hoe Mahabo. Ankatso novaina hoe Ambohitsaina fa hoe sao dia tsy mendrika ilay anarany. Dia ny Barea koa dia sahala amin’izany: impiry nosoloina anarana fa e e e, Komaoro ihany aloha hatreto no azo antoka hoe resin’ny Malagasy.
Koa izao no hafatra tiana hampitaina e: na inona na inona iantsoan’ny olona anao, aza mba mora tohina amin’izany dia aza miezaka ny hiova anarana izany fa tsy ny anarana no maha-ianao anao. Raha mpivarotra arina ianao dia antsoin’ny olona hoe “Saribao”, aza maka lagy raha izay no mahasalama azy. Iza izao no mahita raha Ilesabotsy no anaram-bositr’i Marc Ravalomanana ireny fony mpianatry ny EPP?
I know our love’s forever
Et si ... problème politique, solution mathématique »
« Betax mahadizina